बच्चालाई तेल मसाज गर्दा हुन्छ यी फाईदाहरु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
असोज, काठमाडौं । हामी सबै नवजात शिशुको हेरचाहमा विशेष ध्यान पुर्याउने गर्दछौं । भनिन्छ बच्चा भनेका काचो माटो जस्तै हो, हामीले जस्तो आकार दियौं त्यस्तै बन्छ । हामीले बच्चाको स्यहार गर्दा उसलाई तेल मसाज पनि गर्ने गर्दछौं । हामीले गर्ने मसाज अनुसार नै बच्चाको वृद्धि विकास हुने गर्दछ । यहा हामीले बच्चालाई तेलले मालिस गर्दा हुने केही फाईदाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
के के फाइदा हुन्छ त तेल मसाजले
१. आमाको आत्मियता
मालिस गर्नाले आमा र बच्चाले एकअर्कालाई राम्ररी चिन्न सक्छन् । मालिस गरिदिने मानिसप्रति नवजात शिशुको झुकाव बढ्न थाल्छ । बच्चाले मालिस गर्ने मानिसको स्पर्श महशुश गर्ने गर्दछ । यसकारण सकेसम्म आमाले नै आफ्नो नवजात शिशुलाई मालिस गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
मालिससँग नवजात शिशुको भावना पनि जोडिएको हुन्छ । तपाई शिशुलाई कसरी मालिस दिईरहनु भएको छ यसले उसको भावनाको विकासमा पनि मद्दत गर्दछ । त्यसैले सधै मायालु बनेर, शान्त वातावरणमा नझर्की शिशुलाई मसाज गर्नुहोस् ।
मालिसले शिशुलाई न्यानो सुरक्षाको अनुभुति दिलाउँछ । मायासंगै पाएको सुरक्षाको मद्दतले निर्धक्क खेल्न वा वृद्धि विकासमा मद्दत पुग्दछ ।
४. शारिरीक बनावटको विकास
मालिसले शिशुको शारिरीक बनावटलाई केही हदसम्म मिलाउन सकिन्छ भन्ने विस्वास गर्नेगरिएको छ । हुनपनि कतिपय नवजात शिशुको नाक, कान तथा औलाहरु सिधा वा प्राकृतीक रुपमा ल्याउन तपाइले गर्ने मालीसले अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।